मधेसी नेतालाई प्रधानमन्त्रीको आश्वासनः चुनावमा आउनोस्, म संविधान संशोधन गरीछाड्छु – Setosurya
शुक्रबार २६, जेठ २०७४
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनावअघि संविधान संशोधन सम्भव नरहेको प्रष्ट पारेका छन् । तर, यो चुनाव सकिए लगतै संविधान संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
यी युवती जसले ३० भन्दा धेरै युवा ठगिन त्यसपछि…
उडिरहेको विमानभित्रै एक जोडीले आपत्तिजनक कार्य गरेपछि…
नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री देउवाले लिए सपथ
दशैंको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति भण्डारी र पूर्व राजाले यस्तो भने :
अायाे १२० स्थानकाे मतपरिणाम, कुन दलले कति ठाउँ जिते ? (सूचिसहित)
साझा सवालमा अक्सफोर्डको चर्चा पछि खोजियो देउवाको शिक्षा : देउवाले कति र कुन विश्व विद्यालयमा पढेका हुन् ?
देशको अर्थतन्त्र ठेकेदार र सिन्डीकेटवालाको हातमा छ : गृहमन्त्री थापा
विराटनगरमा ओलीको बोली: निर्वाचन आयोग रवरस्टाम्प